कुन समूह कस्तो ? - खेलकुद - साप्ताहिक
एक वर्षपछि रूसमा विश्वकपको आयोजना हुँदैछ र भर्खरै मात्र छनौट भएका टिमहरूबीच समूह विभाजन पनि भएको छ । सहभागी ३२ टिमलाई आठ समूहमा विभाजन गरिएको छ र सुरुमा लिग चरणका खेल समूहमा हुनेछन् । त्यसको समाप्तिमा समूहको शीर्ष दुई स्थानमा रहने टिमले नकआउट चरणको यात्रा गर्नेछन् ।
कुन–कुन टिम दोस्रो चरण पुग्ने बलियो उम्मेदवार हुन् त ? अर्थात् कुन समूह कस्तो छ ?
रूस, साउदी अरेबिया
रूसी भूमिमा पहिलो पटक विश्वकप हुन लागेको छ, त्यसैले रूसी टिममाथि दोस्रो चरणका लागि छनौट हुने दबाब रहनेछ, तर रूस एउटा तथ्यमा ढुक्क हुन सक्छ, किनभने उसले सजिलो समूह पाएको छ । कम्तीमा रूसले यो समूहमा कमजोर मान्न सकिने साउदी अरेबिया र इजिप्टको चुनौती समाप्त गर्न सक्छ । उरुग्वे विश्वकपको दुई पटकको विजेता हो र उसले यसपटक प्रस्तुत गर्ने खेल पनि बलियो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ, किनभने टिममा दुई विश्वस्तरीय खेलाडी छन्, लुइस स्वारेज तथा एडिन्सन कभानी । इजिप्टको टिममा पनि अहिले प्रिमियर लिगमा चम्किरहेका फरवार्ड मोहम्मद सलाह छन् र टिमको प्रदर्शन धेरै हदसम्म उनकै वरिपरि घुम्नेछ । साउदी टिमबाट भने धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यो टिमको कुनै पनि चमत्कारिक प्रदर्शनले रूस वा उरुग्वेको बाटो भने छेक्न सक्छ ।
समूह बीको प्रमुख आकर्षण हुनेछ, पोर्चुगल र स्पेनबीचको भिडन्त । पोर्चुगल युरोपेली च्याम्पियन हो । क्रिस्टियानो रोनाल्डोको नेतृत्वमा पोर्चुगललाई दोस्रो चरण पुग्न कठिन हुने छैन, यस्तै स्थिति स्पेनको पनि रहनेछ । स्पेनले पछिल्लो विश्वकप डिफेन्डिङ च्याम्पियनका रूपमा खेलेको थियो, तर उसको प्रदर्शन कमजोर रह्यो । अहिले स्पेनी टिम पुनर्निर्माणको चरणबाट गुज्रिरहेको छ र छनौटमा राम्रो प्रदर्शनका आधारमा उसले पनि दोस्रो चरणको यात्रा तय गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । मोरोक्को र इरानको काम यिनै दुई ठूला टिमविरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गर्नु हुनेछ, तर कुनै पनि फुटबल पण्डितले उनीहरूबाट अनपेक्षित नतिजाको आशा गरेका छैनन् । कथंकदाचित उनीहरूले अस्वभाविक नतिजा निकाले भने पोर्चुगल र स्पेनले ठूलै अवरोधको सामना गर्नुपर्नेछ ।
फ्रान्सले सम्भवत: यति सजिलो समूहको अपेक्षा गरेको थिएन, तैपनि फ्रान्सले यो समूहबाट अघि बढ्न संघर्ष नै गर्नुपर्नेछ । यसको कारण हो, पछिल्लो विश्वकपमा फ्रान्सको कमजोर प्रदर्शन । फ्रान्सेली टिम अहिले एक अर्थमा पुनर्निर्माणबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसैले सबै खेलाडीले उत्तिकै बलियो प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो युरोकपमा फ्रान्सले फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेर टिम सही दिशामा अग्रसर भएको छनक भने दिइसकेको छ । फ्रान्सलाई छाडेर नकआउट चरण पुग्ने टिमका लागि सम्भवत: त्रिकोणात्मक संघर्ष हुनेछ र संयोगले यो भिडन्त एसियाविरुद्ध युरोप, युरोपविरुद्ध दक्षिण अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाविरुद्ध एसिया हुनेछ, जुन आफैंमा रोमाञ्चक रहनेछ ।
धेरै अर्थमा यो समूहलाई कठिन मान्न सकिन्छ । मूल प्रश्न हो, लियोनल मेसीको अर्जेन्टिनाले कस्तो प्रदर्शन गर्नेछ ? दक्षिण अमेरिकी छनौटमा अर्जेन्टिना राम्रो प्रदर्शनका लागि संघर्षरत रह्यो, भलै टिममा स्टार खेलाडीको कमी छैन । त्यसैले यिनै स्टार खेलाडीले एक ढिक्का भएर कस्तो प्रदर्शन गर्नेछन्, त्यसमै अर्जेन्टिनाको भाग्य निर्भर रहनेछ । तैपनि अर्जेन्टिना विश्वकपको प्रबल दावेदार हो । अर्जेन्टिना पछिल्लो विश्वकपमा पनि फाइनलसम्म पुगेको थियो । यो समूहमा क्रोएसिया पनि उत्तिकै बलियो मानिन्छ । यस्तै स्थिति विश्वकपमा डेब्यु गर्न लागेको आइसल्यान्ड र अफ्रिकी शक्ति नाइजेरियाको पनि छ । यस्तोमा यो समूहमा प्रतिस्पर्धात्मक खेलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अरुको तुलनामा यो अर्को बलियो समूह हो र यसमा सबैभन्दा ठूलो आकर्षण रहनेछ— ब्राजिल । दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनौटमा ब्राजिलले शक्तिशाली प्रदर्शन गरेको थियो । नेयमारको नेतृत्वमा ब्राजिलले सम्भवत: सजिलै दोस्रो चरणको यात्रा गर्नेछ, तर उसलाई अरु तीन टिमले उत्तिकै बलियो चुनौती पेस गर्ने पनि तय छ । स्विट्जरल्यान्ड र सर्बियाले युरोपेली छनौटमा राम्रो खेलेका थिए । त्यसैले पनि उनीहरूको प्रदर्शन कमजोर हुनेछैन । कोस्टारिकाले पनि पछिल्ला केही विश्वकपमा राम्रो प्रदर्शन गरेका आधारमा यो टिमबाट समेत बलियो चुनौतीको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रत्येक विश्वकपमा झैं ब्राजिल भने उपाधिको दावेदार रहनेछ नै, अनि धेरैले समर्थन गरेको टिम पनि यही हुनेछ ।
स्वीडेन, दक्षिण कोरिया
जर्मन टिम अहिले निकै राम्रो लयमा छ । प्रशिक्षक जोचिम लोको नेतृत्वमा जर्मनीले शतप्रतिशत नतिजा निकालेर छनौटमा अविश्वनीय प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसमाथि जर्मनी फिफा वरियतामा नम्बर एक टिम हो, अनि डिफेन्डिङ च्याम्पियन पनि । के जर्मनीले यसपटक उपाधिको रक्षा गर्न सक्छ त ? प्रश्न कठिन भए पनि भन्न सकिन्छ, यो जर्मन टिमले कम्तीमा पनि सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गर्नेछ, किनभने उसको प्रदर्शनको इतिहास नै त्यस्तै छ । दोस्रो चरण पुग्ने अर्को टिमका लागि बाँकी दुई देशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ र ती हुन्, मेक्सिको र स्वीडेन । दक्षिण कोरियाले यो समूहमा संघर्ष गर्नुपर्नेछ भने उसको अस्वभाविक खेलले कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको नतिजा उल्टियो भने अप्ठ्यारोमा पर्ने टिम मेक्सिको र स्वीडेन नै हुनेछन् ।
जुन समूहमा इंग्ल्यान्ड रहन्छ, त्यो समूहको चर्चा बढी हुन्छ । अर्को चर्चा के पनि हुनेछ भने के यसपटक पनि यही इंग्लिस टिम पहिलो चरणबाटै बाहिरिने त होइन ? टिममा जतिसुकै ठूला स्टार भए पनि इंग्लिस टिमले विश्वकपमा राम्रो गर्न नसकेको धेरै भैसकेको छ । सम्भवत: यसपटक त्यस्तो हुनेछैन र कम्तीमा इंग्ल्यान्ड नकआउट चरणमा पुग्नेछ । दोस्रो चरणमा पुग्ने इंग्ल्यान्डको भन्दा बलियो आधार बेल्जियमको छ । अहिले बेल्जियमको फुटबल टिम आफ्नो देशकै इतिहासको स्वर्णिम समयबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तोमा पनामा र ट्युनिसियाबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन । एक अर्थमा विश्वकपका लागि यी दुवै टिम नयाँ हुन् ।
यो समूह भने आउने विश्वकपकै सबैभन्दा खुला समूह हो अर्थात यो समूहमा सबै प्रकारको नतिजा खुल्ला छ । चार टिममध्ये संभवत: पोल्यान्डबाट केही बढी अपेक्षा गर्न सकिन्छ, किनभने यो पोलिस टिममा छन्, अहिलेको पुस्ताकै सबैभन्दा राम्रा फरवार्ड रोबर्ट लेवन्डोस्की । उनले युरोपेली छनौटमा पनि सर्वाधिक गोल गर्दै गज्जबको खेल प्रदर्शन गरेका थिए । उनकै खेलको आधारमा पोल्यान्ड यो पटक विश्वकपको यो चरणसम्म पुगेको हो । त्यसैले उनकै खेलमा पोल्यान्ड अर्को चरण पुग्ने हो अथवा होइन भन्ने कुरा निर्भर हुनेछ । सेनेगेल, कोलम्बिया तथा जापानबाट समान प्रदर्शनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सम्भवत: कोलम्बिया केही बलियो छ कि ?